नेपाल समूहका अधिकांश नेता न एमाले न एमाले समाजवादी ! « Rara Pati
नेपाल समूहका अधिकांश नेता न एमाले न एमाले समाजवादी !
२ भदाै, काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेर पार्टी एकताको पक्षमा रहेका नेताहरु अहिले न त संस्थापन ओली समूहमा रहेका छन्, न त नेपाल समूहमै देखिएका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी भएसँगै नेपाल समूहले माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा नेकपा एमाले (समाजवादी) गठन गर्न लागिएको छ । यसका लागि नेपाल समूह निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेका छन् ।
तर, संस्थापन समूहसँगको शक्ति संघर्षमा साथ दिएका उपाध्यक्ष भीम रावलसहितका नेताहरु भने अहिले नेपाल समूहमा गएका छैनन् । अर्थात् नयाँ पार्टी दल गर्ने कार्य उनीहरु सहभागी भएका छन् ।
नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान गरेर पार्टी एकता गर्न नेपाल समूहबाट सक्रिय रहेका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईसहितका नेताहरु देखिने गरी एमाले समाजवादीमा सहभागी भएका छैनन् ।
साथै नेपाल समूहमा नदेखिएका उनीहरु संस्थापन ओली समूहमा पनि गएका छैनन् । संस्थापन ओली समूहमा देखिएका केही प्रवृत्ति सच्याउनुपर्ने उनीहरु बताइरहेका छन् । लामो समयदेखि माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भने ओली समूहमा गएको देखिन्छ ।
उनी एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा चयन भएकी छन् । साथै उनी बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि बन्ने भएकी छन् । शाक्यबाहेक नेपाल समूहका रावलसहितका नेताहरु अहिले कुनै पनि समूहमा देखिएका छैनन् ।